Palatability ukudla okushisayo kuzoncika indlela ingulube eyosiwe. Indlela ukulungiselela, kunezindlela eziningi. Sinikeza ezinye izindlela ezinkulu.
Okokuqala, ake sicabangele indlela yokosela yengulube ngezinkomishi ezinamekwe ngomthofu.
Impumelelo lokhu dish ubani ozothola ephelele iresiphi ocwebezelayo, sibonga ngalo izimbambo kungenziwa kuphekwe on the hlupha, hhayi kuphela, kodwa futhi kuhhavini. Dish uzothola nombono nice.
Hlukanisa amakhilogramu izingcezu lulwimi siphelile Ngamunye kubo was hhayi ningi than izimbambo ezimbili. Kulahleni epanini, amboze ngamanzi, engeza usawoti ukunambitha nesweli (amazinyo eziyishumi). Bilisa, ikhava, ukunciphisa ukushisa imizuzu ihora elilodwa. Ngaphezu kwalokho, izimbambo on ipuleti futhi ushiye efrijini ngobusuku obubodwa.
Ngakusasa, siqala ukulungiselela Uqweqwe. Ukuze lokhu kumele kahle exubile ebhodweni ingilazi ibhilikotsi ujamu oqoshiwe onion encane, inkomishi eyodwa kwezine zawo isoso, nezinkezo ezimbili ezinkulu brown sugar, ku spoon encane ginger yashizi kanye soy sauce. Ngaphezu kwalokho kubalulekile ukufudumeza ingxube abilayo futhi imizuzu isimo for ngomzuzu owodwa. Qiniseka ukuthi ukumboza ke esiqandisini ke.
Ngaphambi ingulube eyosiwe, kudingeka ngokucophelela elingenamikhono izingcezu nge glaze wena. Ngokulandelayo, shisisa hlupha Fry chops, babadedisela njalo. Uma kudingeka gcoba nabo nopende ocwebezelayo. Khonza kungaba kokubili ashisayo futhi chilled.
Manje ake sicabangele indlela ukupheka ingulube chops.
izingcezu ezifanayo imikhiqizo Semi-siphelile (kuzo zonke - ikhilogremu inyama) kudingeka marinate ebusuku, ukuze babe namanzi. Kuze kube yimanje, inyama yengulube, ezimbili oqoshiwe onion izindandatho ingilazi izoso sauce udinga uhlanganise, indawo esiqandisini. Marinate inyama akufanele kube amahora engaphansi kwemithathu, futhi kungcono ukushiya ubusuku bonke.
Ngaphezu kwalokho, kunezindlela ezimbili njengoba eyosiwe yengulube ukuphi.
Okokuqala, shisisa hlupha upheke inyama imizuzu amabili, ukuvula njalo.
Okwesibili, ingulube kungenziwa ephekwe eziko, ngokubeka izingcezu kule "isiguqo" anyanisi zifakwe emanzini anosawoti.
It kuvela kakhulu ithenda nesitsha okubabayo kube luqhatshi okubabayo.
Ngokuvamile zikhona izikhathi lapho izivakashi kukhona endlini ngendlu, futhi dinner okwamanje. Ake sihlole indlela ngokushesha ukupheka ingulube. Sincoma ukwenza kebabs okumnandi kanye namanzi "Ngokuba mzuzu."
Ukulungisa isidlo uzodinga amagremu ayikhulu izoso sauce, wezipuni ezimbili ezinkulu Dijon lwesinaphi, ingilazi fresh rosemary oqoshiwe, ikhilogremu lawo elilodwa yengulube nezibopho, Diced uphayinaphu okusemathinini (eyodwa yasebhange), ama-cube enkulu green bell pepper, red anyanisi izindandatho chapped.
Ukuze inqubo zokuyithambisa inyama adinga imizuzu eyishumi nanhlanu. Ukuze wenze lokhu, uhlanganise wonke izithako, ingulube Imi ku cubes kuyafana for izoso wafaka lonke izingxenye.
Ngalesi sikhathi, ukushisa hlupha lokushisa eliphezulu. Nge izingcezu inyama ukususa string ketshezi kubo on skewers, kushintshana uphayinaphu, onion amasongo kanye pepper. Ukupheka imizuzu eyishumi nanhlanu.
Trek Jet 20: incazelo kanye nokubuyekeza
Indlela pose ukuthwebula isithombe studio futhi endleleni?